Suuriya Oo Sheegtay Qabashada Saraakiil Malatari oo Shisheeye | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > WARARKA	> Suuriya Oo Sheegtay Qabashada Saraakiil Malatari oo Shisheeye
Tuesday, August 7, 2012 Laaska News
Suuriya waxay sheegtay in ciidamadeeda ka dagaalamaya ama dagaalka iyo weerarka ku haya qaybaha ay falaagadu ka haystaan caasimadeeda ganacsiga ee Xalab ay ku qabteen saraakaal malatari oo dhawr ah kana soo jeeda am u dhashay Sacuudiga iyo Turkiga.
Waxa horrey loo sheegay in Reuters ay sheegtay in magaalada Adana ee Turkiga ay hadda tahay hoyga saldhig qarsoodi ah oo ay u isticmaalaan dhawr waddan xiriiranta taageerada malatari ee ay siinayaan falaagada Suuriya.
Falaagada ay hogaaminayaan waxa loo yaqaan ama isku magacaabay ciidamada Suuriya ee xorta (CSX).
CSX meelaha ay ka haystaan Xalab waxaa weerar ku haya Taangiyada Suuriya,Diyaarado iyo Helikobtarada dagaalka.
Sidaa waxaa qortay VOR oo soo xiganaysa RIA
Warkan iyo Warar kale oo Suuriya ah kuna qoran Somali ama English Ka Akhri ama ka dooro xagga hoose.
Syria reports capturing foreign military officers (Aug 6, 2012
Shirkii Saxiixayaasha Roadmap-ka Ee Nairobi Oo Laga SooSaaray War-Murtiyeed (August 6, 2012) Syria reports capturing foreign military officers (Aug 6, 2012)